Ceni : “Amin’ny 10 janoary ny voka-pifidianana ofisialin’ny HCC” | NewsMada
Ceni : “Amin’ny 10 janoary ny voka-pifidianana ofisialin’ny HCC”
Ao anatin’ny fampielezan-kevitra izao… Hanao ahoana ny fifidianana? Amin’ny 10 janoary ny voka-pifidianana ofisialin’ny HCC, raha ny nambaran’ny eo anivon’ny Ceni.
“Maniry ny Ceni mba hatao fanomezana ho an’ny vahoaka malagasy amin’ny faran’ny taona ny voka-pifidianana vonjimaika feno amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika.” Io ny nambaran’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, afakomaly, momba ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika feno amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika fihodinana faharoa.
Manahirana ny hamory olona amin’ny 1 janoary 2019. Koa mieritreritra ny Ceni fa havoaka ny 31 desambra izay voka-pifidianana izay. Mety ho alohan’ny 31 desambra aza izany, raha mizotra araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Izay no irina.
Ny 19 desambra ny fihodinana faharoa. Manana dimy andro ny eny anivon’ny sampana mpanisa vato (SRMV) eny anivon’ny distrika, fa hatramin’ny 24 desambra ny fe-potoana farany tsy maintsy hahatongavan’ny antontan-taratasy mirakitra ny voka-pifidianana avy any amin’ny birao fandatsaham-bato eny amin’ny SRMV. Tsy maintsy aterin’ny SRMV eny anivon’ny distrika mankeny amin’ny Ceni foibe, Antananarivo, ireo voka-pifidianana ireo ny 25 desambra.
Malalaka ny famindram-pahefana
“Manana fito andro manomboka amin’io 25 desambra io ny Ceni foibe hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaika feno”, hoy izy. Raha kajiana izay, ny 1 janoary 2019 no fe-potoana farany hamoahan’ny Ceni izay voka-pifidianana vonjimaika feno izay.
Sivy andro aoriana izay kosa no tokony hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny voka-pifidianana ofisialy. Farafahelany ny 10 janoary 2019 izany, na aoriana kelin’izay raha tsy isaina ny andro tsy fiasana toy tamin’ny namoahana ny voka-pifidianana ofisialy, fihodinana voalohany.
Misy tsara ny fotoana, hatramin’ny 25 janoary, hanomanana ny famindram-pahefana eo amin’ny filohan’ny Repoblika teo aloha, Rajaonarimampianina, amin’ny filohan’ny Repoblika vaovao voafidy. Malalaka tsara izay ary voahaja ny voalazan’ny lalàmpanorenana amin’izany.